Iindaba -U-Zhou Jiangyong waya kumenzi wesigqubuthelo se-Jiande ukwenza uphando
Emva kwemini kaJanuwari 27, uZhou Jiangyong, ilungu leKomiti eSisigxina yeKomiti yePhathi yePhondo kunye noNobhala weKomiti yeQela likaMasipala waseHangzhou, waya eChaomei Daily Chemical Co., Ltd. (umenzi wemveliso yokukhusela ubhubhane) ukuphanda. Ucacisile ukuba kunyanzelekile ukuba uwuphumeze ngokupheleleyo umoya wemiyalelo ebalulekileyo kaNobhala Jinping, kwaye ngokuhambelana nezigqibo kunye nokuthunyelwa kweKomiti ePhakathi yeQela, iBhunga likaRhulumente, iKomiti yeQela lePhondo kunye noRhulumente wePhondo, benze zonke iinzame. ukwenza umsebenzi olungileyo kwimveliso kunye nokubonelela ngezixhobo zokuthintela ubhubhane, ukuqinisekisa iimfuno zokuthintela ubhubhane, ukulawula kunye nokunyanga, kunye nokuqinisekisa ukhuseleko nokhuseleko lwabantu. Umzimba osempilweni. Iinkokheli zeSixeko saseHangzhou uXu Ming kunye noKe Jixin kunye neenkokheli zesixeko sethu uTong Dingqian, uZhu Huan, kunye noZheng Zhihua bathathe inxaxheba.
Kwindibano yocweyo yaseChaomei Daily Chemical Co., Ltd., iibhokisi zeemaski zipakishwe kwaye zikulungele ukuthunyelwa kuzo zonke iindawo zelizwe. Ukuthintela kunye nokulawula ubhubhane wenyumoniya obangelwe yi-coronavirus entsha, abasebenzi baseNyakatho Korea, e-United States nase-Japan Chemical banikezele ngoMnyhadala weNtwasahlobo ukuba baphinde badibane neentsapho zabo kwaye babuyela kumzi mveliso ukuze basebenze ixesha elongezelelekileyo ukwenza iimaski .
Ecaleni komgca wemveliso yaseNyakatho Korea naseMelika, uZhou Jiangyong uvakalise umbulelo wakhe kubasebenzi baseSexiaojia kuye wonke umntu, kwaye wakhuthaza wonke umntu ukuba andise imveliso, akhawulezise ukuhanjiswa kwemveliso, kwaye enze igalelo elingaphezulu kuthintelo nolawulo lwelizwe. , iphondo, kunye nesixeko. Emva kokuqonda inkqubo yokuvelisa, amandla emveliso kunye noludwe lweemaski ngokweenkcukacha, uZhou Jiangyong wakhankanya ukuba iimaski zokhuselo zizinto eziyimfuneko kuthintelo nolawulo lobhubhane. Ukusukela oko kwaqhambuka inyumoniya ebangelwe yi-coronavirus entsha, ibango leemaski kunye nezinye izixhobo zokukhusela ziye zanda. Iinkampani zokuthintela kunye nokulawula izinto ziyayazi imeko ngokubanzi kwaye zithathela ingqalelo imeko iyonke, zinike ixesha lokuphumla loMthendeleko weNtwasahlobo, zigcwalise ngokupheleleyo iziqinisekiso zemveliso, kwaye zidlale indima ebalulekileyo ngamaxesha anzima. Ndiyathemba ukuba uya kwenza konke okusemandleni akho ukoyisa ubunzima, kwaye phantsi kwesiseko sokuqinisekisa umgangatho kunye nokhuseleko, uya kuzama konke okusemandleni akho ukwandisa amandla emveliso kunye nokuqinisekisa iimfuno zamaziko ezonyango kunye noluntu. Onke amasebe afanelekileyo kufuneka enze konke okusemandleni awo ukuqinisekisa ngenkonzo, ukulungelelanisa nokusombulula iingxaki ezibonakalayo ezinjengokwabiwa kwemathiriyeli eluhlaza, ukuhanjiswa kwempahla, ukuhlolwa kwemveliso esemgangathweni, kunye nokunikezelwa kwemikhosi yamavolontiya ngokusesikweni kwiiarhente, kumashishini nakumaziko ukunceda kwimveliso, kunye nokunceda amashishini ngokwemiqathango kubasebenzi, izixhobo kunye nezixhobo zemali. Umthamo opheleleyo wemveliso uqinisekisa ukubonelelwa ngezixhobo ezikhuselayo ezinje ngeemaski kwaye zibonelela ngenkxaso eyomeleleyo kuthintelo kunye nokulawula ubhubhane.